News - Qingdao Silinde Warshadaha Qalabka Co., Ltd.
Qingdao Silinde Warshadaha Qalabka Co., Ltd. waxay u heellan tahay cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta mashruuca qalabaynta warshadaha YSC ee sanadihii la soo dhaafay. Iyada oo halganno joogto ah ay shirkadeennu waddo sannado, alaabooyinka YSC ayaa laga iibiyay adduunka oo idil. Iyada oo tayo sare leh, adeegyo la dhammaystiray iyo qiimaha ugu tartamaya, waxay noqotay mid ka mid ah noocyada ugu kalsoonida badan ee warshadaha kontoroolka warshadaha ee Shiinaha. Iyadoo loo marayo iskaashi farsamo oo muddo dheer ah oo lala yeesho shirkadaha Yurub, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed, waxay kobcinaysay nidaamkeeda wax soo saar waxaana lagu kordhiyay is-xakamaynta qalabka iyo qalabka qaaska ah ee laga helo badeecadaha hawo-wadista. Shirkaddayadu waxay aasaastay nidaam maareyn tayo leh oo taxaddar leh si loo hubiyo in tayada wax soo saarka ee sumadda YSC ay gaarto heer sare oo ka mid ah asxaabteeda adduunka.
Tan iyo markii la aasaasay, YSC, oo ah sumcad caan ah oo ku jirta warshadaha hawo-beelka pneumatic, ayaa si firfircoon ugu lug lahayd geeddi-socodka warshadaha ee Shiinaha. Waxay u hoggaansamaysay QSPT (tayada, adeegga, qiimaha, waqtiga) mabda'a maaraynta ganacsiga iyo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah iyo ku habboon u leh isbeddellada horumarineed ee otomatiga warshadaha ee Shiinaha si loo bixiyo adeegyo iyo adeegyada warshado badan oo ay ka mid yihiin baakadaha, daabacaadda, elektarooniga, qalabka korontada, gaari, mashiinno, metallurgy, alxamid, kontoroolka dhijitaalka ah, batroolka iyo warshadaha kiimikada ee Shiinaha oo dhan. Waqtigaan la joogo, shirkado badan oo caan ah oo ku yaal Shiinaha ayaa iskaashi dheer nagala yeeshay.
Maaddaama geeddi-socodka warshadaha otomaatiyada warshadaha ee Shiinaha ay sii xoogeysanayaan, caqabado cusub ayaa loo soo rogay mashiinnada gudaha iyo warshadaha otomatiga. Dhanka kale, waxay sidoo kale siinaysaa fursado horumarkeenna. Qeybtii labaad ee 2006, waxaan talo gelinay oo aan aasaasey Saldhigga Waxsoosaarka YSC Shiinaha oo markii hore aan dhisnay koox horumarineed. Bulshada maanta marka kharashaadka waxsoosaarka si tartiib tartiib ah loo wanaajiyo, waxyaabaha ugu waaweyn ee YSC ayaa ilaaliya tartanka qiimaha iyadoo lagu saleynayo in tayada la damaanad qaaday. Waqtigan xaadirka ah, taxanaha horumarka iyo wax soo saarka ayaa kor u kacaya. Marka laga reebo shuruudaha lagu qanco ee amarrada gudaha, qaar ayaa lagu cunaa Koonfurta Kuuriya iyo waddamada Koonfur-bari Aasiya. Dhowr sano oo shaqo adag ah ka dib, waxay heshay ictiraaf suuq geyn hal mar oo dheeri ah. Sidaa darteed, sumadda YSC ma aha oo kaliya dookhaaga ugu fiican laakiin sidoo kale adeegyo damaanad u ah guushaada. Maalmaha soo socda, waxaan sii wadi doonnaa inaan sii wadno mabda'a ku saabsan taxaddar la'aanta inkasta oo faa'iido qiyaaseed iyo aan si xun u adeegsan lagu kasbado faa'iidooyinka. Waxaan si buuxda ugu heellan nahay horumarinta mashiinnada iyo otomatigga ee Shiinaha.
Waxaan jeclaan lahayn inaan gacan kaa siino abuurista mustaqbal rajo leh ee otomaatiyada warshadaha gudaha.